Toa misy fampiantsoana “procureur” na lehiben’ny tonia mpampanoa lalàna sy Filohan’ny Fitsarana mihitsy, hoy ny Filohan’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara na ny SMM Clément Jaona omaly. Mivoaka hatramin’ny resaka fa misy andiana miaramila hikomy sy tsy handray anjara amin’ny fetim-pirenena, ka misy io matoa tonga hatrany anaty fesiboky, raha ny heviny. Tsy manaiky fampihorohoroana izahay aty amin’ny Fitsarana, ary avelao ny fitsarana hanao ny asany, hoy ity mpitsara ambony ity hentitra dia hentitra. Tokony hoesorina ihany koa, hoy izy, ny “autorisation de poursuite” na alalana hahafaha-manenjika olona ambony izay angatahana alalana amin’ny lehibe vao azo henjehina satria hafa raha heloka ara-miaramila, fa rehefa heloka manitsakitsaka ny maha olona, tonga dia azo samborina. Ohatra ny olona namono olona rehetra ireo, ary efa nankato sy nanasonia ny fanafoanana ny fanamelohana ho faty na ny “peine de mort” isika. Re fa nisy ny baiko hoe: avotsory saingy tsy navotsotra. Ahiana ny ho fivoahana tsiambaratelo mombana aferana basy, ka izay no namonoana azy ireo, raha ny fahitan’ny filohan’ny SMM azy.
Olona 10 indray no maty
Tany Amparihitsiritra, Kaominina Ankeliloha any Tsaratanana, dia olona 10 indray no maty novonoin’ny miaramila, nolazaina fa dahalo ka ny 3 mpirahalahy. Any Mahatsinjo Kaominina Betrandraka, dia fanolanana fotsiny indray ao no ataon’ny miaramila. Any Ambanjabe sy Ambatomitsangana, dia vaky trano indray satria ny olona mandeha miasa any an-tanimbary mandidy vary, ka alaina ny vola sy ny firavaka na koa zavatra sarobidy. Araka ny fitarainan’ny olona, aleony mihaona amin’ny dahalo toy izay mihaona amin’ny mpitandro filaminana, raha ny vaovao azo, hoy ity mpitsara ity.